Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): June 2013
တပေါင်းကွင်းမြေယာကိစ္စ ပအိုဝ်းစာ/ယဉ်အဖွဲ့မှ ဒေသခံရွာသူရွာသားများကို ဆင့်ခေါ်
ဇွန်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခု၊ တာင်ကြီးတိုင်းမ်
၁၄-၆-၂၀၁၃ နေ့စွဲဖြင့် တောင်ကြီးတိုင်းမ်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အမျိုးသားအတွက် အကြောင်းပြပြီး တောင်ကြီးအနီးရှိ မြေယာများကို အကွက်ရိုက် ရောင်းချဖို့ရန်ပြင် ဟူသော သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုအခါတွင် PNO ၏ လက်အောက်ခံ ပအိုဝ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ၃၀-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်တကွ ရွာသူရွာသားများကို အတင်းဖိအားပေးရန် ရည်ရွယ်လျက် တပေါင်းကွင်း (ဒဉ်သီးလာဗွေကွင်း) သို့ လာရောက်ရမည်ဟု စာဖြင့် ခေါ်ယူထားကြောင်း ရွာသားတစ်ယောက်ထံမှ ကြားသိရသည်။
ခွန်သန်းအောင် (TGI) | ဇွန်လ ၂၈ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါဝ်စံပြကျေးရွာအတွင်းရှိ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ အလယ်တန်းခွဲကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့် မူလွန်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတို့ကို ခွန်ချစ်ထွန်းနှင့် ခွန်မောင်သန်းတို့ဦးဆောင်သည့် ဆိုက်ခေါဝ်လူရွယ်များက ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက်၌ ကျောင်းသုံးစာရေးကိရိယာများနှင့် သောက်သုံးရန် ရေအိုးများကို ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှု ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသမီးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ အင်္ဂလိပ်စာဆရာအဖြစ် လူငယ်များ ပညာသင်စေလွတ်
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | ဇွန်လ ၂၇ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သီရိဇေယျုံကျောင်း၊ ဇမ္ဗူရတနာမြတ်မင်္ဂလာကျောင်း၊ ဂန္ဓာရုံကျောင်းတို့ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများနှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသမီးပညာရေး ဖောင်ဒေးရှင်းတို့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ပထမအကြိမ် အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာဖြစ် (၂)နှစ် သင်တန်းသို့ တက်ရောက်မည့် သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများ (၄၀) ကျော် သြ၀ါဒခံယူပွဲတစ်ရပ်ကို တောင်ကြီးရုံးတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကြီးမြို့တွင် ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး ဦးစီး၍ အမျိုးသမီးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပ
ခွန်စိမ်းမောင် (တောင်ကြီး) | ဇွန်လ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (Pa-Oh Youth Organization-PYO) ဦးစီး၍ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရဒေသမှ ပအိုဝ်းလူငယ်အမျိုးသမီးများ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ရပ်ကို တောင်ကြီးမြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဟိုပုံးမြို့နယ် ကျောက်တန်းကျေးရွာ လျပ်စစ်မီးအတွက် မကြာခဏငွေများကောက်ခံ
ခွန်သန်းအောင် (TGI) | ဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ ကျေက်တန်းကျေးရွာတွင် လျပ်စစ်မီးများသွယ်တန်းပေးရန် စီမံကိန်းကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဦးခေါင်၊ ဦးကြုတ်နှင့် ဦးအေးမောင် တို့က မီးကော်မတီဖွဲ့၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း မီးသွယ်တန်းပေးရေးအစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ဟိုပုံး-လွိုင်လင် လမ်းမ ထမ်းစန်းဂူ အနီးရှိ ကျေက်တန်းလမ်းခွဲမှ စ၍ ခွဲယူကာ ၈ မိုင် အကွာအဝေးရှိသော ကျောက်တန်းကျေးရွာအထိသို့ သွယ်တန်းသွားမည်ဟု ဒေသခံများ ကပြောသည်။
By Kanbawza Win | June 22, 2013
Asaperson who has its roots in Pre Pro village in Karenni state and whose uncle Tha Oo is still with the Karenni resistance, I was rather shock to hear the news reports that observers including American diplomat Erin Webster-Main and 10 religious and community leaders and members of Parliament were present at union-level peace talks between the government and Karenni resistance in Loikaw, the capital of Karenni State. It marked the third official meeting between the government and KNPP leaders. Naypyidaw’s peace delegation and the KNPP held their first official talks in March 2012, when the two sides signedaceasefire agreement. They met again in June 2012. For laymen to understand the Karenni problem may I take the liberty to highlight its contemporary history?
အမျိုးသားအတွက်အကြောင်းပြပြီး တောင်ကြီးအနီးရှိမြေယာများကို အကွက်ချ၍ရောင်းဖို့ရန်ပြင်
အမြင်ဆောင်းပါး | ဇွန်လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီးမြို့ တောင်ဘက် ဂနိုင်ရေးရပ်ကွက် ကန်ကြီးရပ်ကွက်၊ (ယခင် ကန်ကြီးရွာ) ကန်ကြီးနယ် မြေတွင် PNO က အများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သဘာဝရေထွက်ရာ ရေကန်ဧရိယာကို ပအိုဝ်းအမျိုးသား တပေါင်းကွင်း လုပ်ငန်းခွင်ကို အကြောင်းပြ၍ အကွက်ချ ရောင်းချရန် ပြုလုပ်နေကြပါသည်။ (ပုဂ္ဂိုလ်တချို့၏ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး အကွက်ထွင်ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး တကယ့် PNO အတွက် ပအိုဝ်းအမျိုးသား အတွက် မဟုတ်ဟု အခိုင်အမာ ပြောဆို သူများလည်း ရှိသည်။)
PNO မှ သိမ်းသောမြေကိစ္စ ဖြေရှင်းမပေး၍ တောင်သူများ ကြံခိုင်ရေးပါတီသို့အကူညီတောင်း
ခွန်ရာဇာ (တောင်ကြီး) | ဇွန်လ 12 ရက်၊ 2013 ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
တောင်ကြီးမြို့နယ် နောင်ကားကျေးရွာ နောင်ကားဈေးအရှေ့ဘက်နှင့် ကျောက်တလုံး လွယ်ခေါ် လမ်းထောင့်၌ PNO အဖွဲ့အစည်းမှ သိမ်းသောမြေကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူနှင့် တိုင်ကြားသော်လည်း ဖြေရှင်းမှုမရှိ၍ မြေသိမ်းခံတောင်သူများ ကြံခိုင်ရေးပါတီရုံးသို့ အကူညီတောင်းပြီး သမ္မတထံသို့ တိုင်စာများ တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် စုံစမ်းသိရှိရသည်။
NLD ပါတီဝင်များ ဖိအားပေးနုတ်ထွက်စေခြင်းနှင့် ထိမ်းသိမ်းခြင်းကိစ္စ မဟုတ်မှန်ကြောင်း PNA ငြင်းဆို
ခွန်ရာဇာ(တောင်ကြီး) | ဇွန်လ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
မေလ ၁၅ ရက်တွင် PNA ပြည်သူ့စစ်က မောက်စံရွာရှိ NLD ပါတီရုံးကို ဝိုင်းထားခြင်းနှင့် NLD ပါတီအဖွဲ့ဝင်ရွာသား ငါးဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဇွန်လ ၃ ရက်တွင် PNO လက်အောက်ခံ အသွင်ပြောင်းပြည်သူ့စစ် (PNA) နှင့် သတင်းမီဒီယာများတွေ့ဆုံပွဲကို နန်းဟောင်ကျေးရွာအုပ်စု ကျောင်းတောစခန်း၌ ပြုလုပ်ကြောင်း သိရသည်။
RCSS/SSA (S) အပြစ်မဲ့ ရွာသားတစ်ဦးကို ပစ်သတ်ပြီး ၇ ဦးကို ပြန်ပေးဆွဲ
ခွန်စိမ်းမောင်(တောင်ကြီး) | ဇွန်လ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသခံရွာသားတဦးအား ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (တောင်ပိုင်း) တပ်ဖွဲ့က အပစ်မဲ့ပစ်သစ်ပြီး ကျန်ရွာသား (၇) ဦးကိုပါ ပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမြင်ဆောင်းပါး | ရေးသူ - ခွန်ပအိုဝ်း | ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၃ ခု | တောင်ကြီးတိုင်းမ်
ကျွန်တော်ပာာ မျိုးချစ်ပအိုဝ်းလူငယ်တစ်ယောက်ပါ။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ခန့်က သစ္စာရှင် (တောင်ကြီး) အမည်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖတ်ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်ပအိုဝ်းလူငယ် တစ်ယောက်အနေဖြင့် ၄င်းဆောင်းပါးဖတ်ပြီးတော့ အဲ့ဒီဆောင်းပါးရေးသူပာာ တောင်ကြီးကဆိုတော့ ပအိုဝ်းလူမျိုးကို ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတာ ခရေစေ့တွင်းကျ သိတယ်ဆိုတာကို သိထားပါတယ်။ မသိလို့ရေးတာလာ၊ “မမြင်မတွေ့လို့ ရေးတာလား”၊ မကြည့်လို့ပဲ မမြင်တာလား၊ သိသင့်သိထိုက်သလောက်တော့ သိမယ်ထင်ပါတယ်။